အာဆီယံဒေသအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုများကို ခုခံကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် အီးယူ၏ ယူရိုငွေ သန်း ၃၅၀ ထောက်ပံ့မှု - European External Action Service
EEAS > Thailand > အာဆီယံဒေသအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုများကို ခုခံကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက် အီးယူ၏ ယူရိုငွေ သန်း ၃၅၀ ထောက်ပံ့မှု
ဂျကာတာ၊ ဧပြီ ၂၇၊ ၂၀၂၀, 27/04/2020 - 09:40, UNIQUE ID: 200427_11
ဥရောပသမဂ္ဂသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ၎င်း၏မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအား ကူညီပံ့ပိုးပေးရေး စီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အာဆီယံဒေသတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားနေမှုကို ခုခံကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်နှင့် ထိုကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် ထိခိုက်မှုများကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ယူရိုငွေ သန်း ၃၅၀ ကို ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ၎င်း၏မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအား ကူညီပံ့ပိုးပေးရေး စီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အာဆီယံဒေသတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားနေမှုကို ခုခံကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်နှင့် ထိုကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် ထိခိုက်မှုများကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ယူရိုငွေ သန်း ၃၅၀ ကို ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ အီးယူအနေဖြင့် လတ်တလောကြုံတွေ့နေရသော ကျန်းမာရေးကပ်ဘေးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်၊ ကျန်းမာရေးစနစ်များ ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန် နှင့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများ သက်သာလျော့ပါးစေရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံတော်အဆင့် နှင့် ဒေသအဆင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အာဆီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး Igor Driesmans က “အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ိုအခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံရတဲ့အခါ ဥရောပသမဂ္ဂကို အားကိုးအားထားပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေဟာ ၄၂ နှစ်တိုင်တိုင် စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ အတူတကွ မိတ်ဖက်လုပ်ဆောင်မှု တို့နဲ့ သွေးစည်းခဲ့ကြတဲ့ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ ယူရိုငွေ သန်း ၃၅၀ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဟာ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ ဒီဒေသတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို ပြသနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသအပေါ် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ ထိရောက်ခိုင်မာတဲ့ စီမံချက်တွေကို ကူညီပံ့ပိုးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ဘေးကို နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှု နဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်သာ ကျော်လွှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် ကဏ္ဍအများအပြားကို ထိခိုက်စေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အွန်လိုင်းမှတွေ့ဆုံသည့် ပထမဦးဆုံးသော ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ အီးယူ - အာဆီယံ အစည်းအဝေးကို မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်၊ အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေရန်၊ ကုန်ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်ဖွင့်ထားရန် နှင့် သိပ္ပံသုတေသနများကို ရှေ့တိုးလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဥရောပသမဂ္ဂသည် ထိုကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအပေါ်တွင် ပိုမို အာရုံစိုက်နိုင်ရန်နှင့် တုံ့ပြန်အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်များအား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အီးယူသည် အာဆီယံနိုင်ငံများရှိ သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းရန်အတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း သုတေသနအသစ် ၁၈ ခု နှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ရေး စီမံကိန်းများကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့၍ (ယူရိုငွေ ၄၈.၅ သန်း) စတင်လုပ်ဆောင်ရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအနေဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ထိခိုက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ရန်အတွက် “ဥရောပအသင်းအဖွဲ့” အဖြစ် ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ကာ ယူရိုငွေ ၂၀ ဘီလျံကျော်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် ကြုံတွေ့နေရသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ နှင့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သာဓကများမှာ :
ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားရသော အမျိုးသမီးအထည်ချုပ်လုပ်သားများ၏ စားဝတ်နေရေးကို ပံ့ပိုးပေးရန် နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ယူရိုငွေ ၅ သန်း ထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံချက်များကို လုပ်ဆောင်နေသော ဥရောပ နှင့် အင်ဒိုနီးရှား NGO များ၊ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - လူမှုရေးဆိုင်ရာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးအကြံပေးမှုများ၊ ထိခိုက်လွယ်သော ရပ်ရွာလူထုအတွက် ကျန်းမာရေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း နှင့် ရပ်ရွာရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကို ကူညီပေးခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် ယူရို ၆ သန်းကိုလည်း ခွဲဝေချထားပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ဖယ်ကြဉ်ချန်လှပ်ခံထားရသော ထိခိုက်လွယ်သည့် ရပ်ရွာလူထုအတွက် အစားအစာ၊ သောက်ရေ သို့မဟုတ် အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အကူအညီပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် လာအိုနိုင်ငံတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့် ကုန်စည်များကို ဝယ်ယူရေးအတွက် UNICEF နှင့် အတူတကွ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ထိုသို့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကို ခိုင်မာအားကောင်းစေမည့်အပြင် ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်ပွားမှု၏ ဆိုးကျိုးများကို သက်သာလျော့ပါးစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် အလုပ်လက်မဲ့များအပါအဝင် ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု အများစုအတွက် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ကျေးလက်ဒေသနှင့် မြို့ပြဒေသများတွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များကိုလည်း မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဥရောပအဖွဲ့မှ အာဆီယံဒေသတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး ထောက်ပံ့ကူညီရန်အတွက် ယူရိုငွေ သန်း၈၀၀ကျော် အသုံးပြု Languages: English ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ၎င်း၏ နောက်ဆက်တွဲတို့ကို တန်ပြန်တိုက်ဖျက်ရာတွင် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများကို ကူညီထောက်ပံ့ရန်အတွက် ဥရောပ သမဂ္ဂမှ အာဆီယံဒေသအတွက် “ဥရောပအဖွဲ့” ရန်ပုံငွေ ယူရိုသန်း ၈၀၀ကျော်အား အသုံးပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထို “ဥရောပအဖွဲ့” နည်းလမ်း နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂသည် ၎င်း၏
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ထောက်ပံ့ကူညီမှုအဖြစ် ဥရောပသမဂ္ဂက ယူရိုငွေ ၃၇.၆၂၅ မီလီယံ [ကျပ်ငွေ ၅၉.၆၉၃ ဘီလီယံ] ပေးအပ်The European Union (EU) disbursed €37.625 million [59.693billion MMK] to further support education reform in Myanmar. The grant is paid earlier than planned to help the Government address the exceptional needs that arose due to COVID-19 and ensureasafe return to school for all children.
ကချင်ပြည်နယ် မြေပြိုမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂမှ ကူညီထောက်ပံ့မည်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်မှ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ကိုင်ကြသည့် ဖားကန့်ဒေသတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော မြေပြိုမှုအတွက် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂသည် ယူရိုငွေ ၈၅,၀၀၀ (ကျပ်ငွေ ၁၃၁ မီလီယံကျော်) ပမာဏရှိသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဤရန်ပုံငွေသည်